६१ अर्ब राजस्व : सरकार र न्यायालय बीच प्रश्न-उत्तर » खबरहरुको एउटै केन्द्र
६१ अर्ब राजस्व : सरकार र न्यायालय बीच प्रश्न-उत्तर
सोमबार, बैशाख १०, २०७५ ०७:२७ मा प्रकाशित !
काठमाडौं । न्यायालयका आदेशले राजस्व गुमेको र विकास निर्माणमा अवरोध भएको विषयमा मन्त्रीहरूले सर्वोच्चका न्यायाधीशहरूसँग प्रश्न गरेका छन्। आदेशहरूमाथि खुला रूपमा बहस गर्न आफूहरू पनि तयार रहेको सर्वोच्चका न्यायाधीशहरूको भनाइ छ।
उठ्ने वेला अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले भने, अन्तिम फैसलाअघि अन्तरिम आदेशले नै राजस्व गुमिसकेको छ । तर, श्रीमान्हरूले पनि खुला छलफलमा भाग लिन्छौँ भन्नु सुखद सन्देश हो । यहाँहरूले पनि कालो कोट फुकाल्नोस्, हामी पनि दौरा–सुरुवाल फुकाल्छौँ । टिसर्ट लगाएर जमेर छलफल गरौँ । आजको नयाँ पत्रिका दैनिकले खबर छापेको छ।
PREVIOUS POST Previous post: औषधि हाहाकार, २५ भन्दा धेरै जिल्लाका स्वास्थ्य संस्था रित्तै !
NEXT POST Next post: मुम्बई विरुद्ध राजस्थानको रोमान्चक जित, गौतमले पल्टाए पासा
बस दुर्घटना, एकको मृत्यु, आधा दर्जन बढी घाइते सोमबार, बैशाख १०, २०७५ ०७:२७
प्रधानन्यायाधीशमा चोलेन्द्रशमशेर जबराको नाम सिफारिस सोमबार, बैशाख १०, २०७५ ०७:२७
नेकपाले न्यूरोडमा लगायो डोजर, यस्ता छन् ६ कारण सोमबार, बैशाख १०, २०७५ ०७:२७
निर्वाचित रेशमलाई जेल कोचेर ठूलो अन्याय : नेतृ हिसिला यमी सोमबार, बैशाख १०, २०७५ ०७:२७
निर्मला हत्या प्रकरणः प्रदीप-विशाल पनि दिलिपजस्तै ‘नक्कली’ अभियुक्त ? सोमबार, बैशाख १०, २०७५ ०७:२७